Himalaya Dainik » थाहा छ ? यस कारण महिलाहरु पुरुषबाट टाढा भाग्छन्
यो पनि पढाैँ – अमेरिकामा २५ संस्कार जुन नेपालमा ठिक उल्टो अर्थ लगाउछन्..
८.अमेरिकन गरिवहरु मोटा हुन्छन खासगरी जंकफुड र सस्ता खाना खाएर । अनि धनीहरु स्वस्थ्य खाना र ब्यायमले स्लीम हुन्छन । हामी काहा गरिवहरु खान नपाएर बढि परिश्रमले पातला हुन्छन धनी धेरै खाएर मोटा हुन्छन ।
२५. अमेरिकन सुन्दर युवतीलाई नचिनेको मान्छेले पनि वाह! कति से’क्सी होस भनेमा थ्याङ्ग.क्यू भनि मुस्कुराउछन । हामीकहा अन्जान सुन्दरीलाई कति सुन्दर रहिछौं भनेमा मात्र पनि चप्पल उठाएर बजाइदिन्छन ।